Fifampitifirana teny Talatamaty… : nahatrarana basy sy bala marobe ireo naman’ilay jiolahy voatifitra | NewsMada
Fifampitifirana teny Talatamaty… : nahatrarana basy sy bala marobe ireo naman’ilay jiolahy voatifitra
Par Taratra sur 09/03/2016
Tsy hafa fa mpiray tsikombakomba sady naman’ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana, maty voatifitry ny polisy teny Talatamaty, farany teo, izy fito mianadahy tratran’ny vela-pandriky ny polisin’ny BC ireto. Basy sy bala marobe no tratra teny amin’izy ireo. Miralenta tokoa e !
Ravan’ny polisy indray ny tambajotran-jiolahy eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Olona fito mianadahy voasambotry ny polisy tamin’izany, izay vehivavy ny telo ary lehilahy ny efatra. Nahatrarana basy miisa enina niaraka tamin’ny bala marobe ihany koa tany amin’izy ireo. Nisy tamin’ireo basy ireo ny basy vita gasy nitovy tamin’ireo efa hita tamin’ny herintaona teny Anosipatrana.
Araka ny fanazavana avy lehiben’ny BC Anosy, ny kaomisrea Ostrome Whenss, tamin’ny mpanao gazety, naman’ireo jiolahy teny Talatamaty Imerinafovoany, ny herinandro lasa teo ireo. “Mpiray tsikombakomba tamin’ilay voatifitra antsoina hoe Vazaha sy ilay tratra sambo-belona, ireto tratra farany ireto. Misy amin’ireo ny mpitazona fitaovam-piadiana, ny mpitazona entana halatra”, hoy ny fanazavana. Nanafika karana, sinoa ary nitifitra olona teny Andranomena izy ireo.
Ankoatra ny teny Talatamaty, nisy ihany koa ny fanenjehan-jiolahy teny Avaratr’Antanimora. Nifandona ny polisy sy ny olon-dratsy tamin’izany, nisy ny fifampitifirana. Nirefodrefotra ny poa-basy teny an-toerana ny alin’ny zoma lasa teo. Nisy ny voasambotra tamin’izany fotoana izany, ka tamin’ny alalan’ireo no nahafahana namantatra ireto namany. “Nanoro ny namany sy niaiky ny heloka nataony ireo rehefa natao famotorana”, hoy ny fanazavana.
Nosamborina tsikelikely ireo olona ireo rehefa natao ny vela-pandrika, ary fantatra fa mbola misy roa hafa karohina fatratra naman’izy ireo. “Efa fantatra ny momba azy ireo, ary eo am-pikarohana azy ireo izahay”, hoy ny polisy.
Ady amin’ny jiolahy
Nilaza ny polisy fa vonona amin’ny ady amin’ny jiolahy mahery vaika eto an-drenivohitra. Anisan’ny manafaingana izany, hoy ny filazan’ny polisy, ny fanampian’ny olona azy ireo, amin’ny alalan’ny fanomezam-baovao, ny antso, sns.
Anisan’ny mampitaraina ny olona koa anefa ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana, ny fanendahana efa ho isaky ny elakelan-trano eto an-drenivohitra. Manampy trotraka izany ny fahafatesan’ny andrin-jiro amin’ny lalana maro, toy ny eny Antanimena, Ankadifotsy, Andravoahangy, sns, iny, izay mampanararaotra ireo jiolahy. Ankoatra ny fanendahana tsotra, mamono sy manao herisetra ireo olon-dratsy. Ity toe-javatra mampitaraina ny olon-tsotra, tsy manana villa ho tafihina no antenain’ny olona handraisana fepetra haingana ihany koa. Ny fampitomboana ny fisafoana amin’ny hariva sy alina any amin’ireo faritra mafana. Ankoatra ireo fanenjehana ireo jiolahy raindahiny izany, manantena ny fanenjehana ireo mpanendaka ihany koa ny olona.